Isbaheysiga la dagaalanka wadaadada Diinta Islaamka oo ah mashruuc xambaarsan in dagaal la isugu adeegsado dagaaloogayaasha iyo wadaadada Soomaaliyeed si dhimashada ka dhalata dhexdooda ay u keento dhamaadka labada kooxood.
Buluugleey, March 1, 2006
Waxaa magaalda Muqdisho looga dhawaaqay isbaheysi ujeedadiisu tahay la dagaalanka wadaadada diinta Islaamka. Hogaamiye kooxeedyada Muqdisho ayaa mashruucan waxaa u soo bandhigay Bashiir Raage Shiirar oo ah ninka haysta maleeshiyada garoonka Cisiley, kaas oo horay u dhoofiyey wadaado uu ku gatay lacag, kuwaas oo uu u gacan geliyey sirdoonka Mareykanka iyo Itoobiya.
Bashiir ayaa isku daygiisii u dambeeyey ku fashilmay kadib markii uu isku dayey inuu sirdoonkaas gacanta u geliyo Wadaadka Abuukar Cadaani ee iska leh hotelka Ramadaan haddana ay isku heybta yihiin, kaas oo laga baadi goobayey raad lagu tuhunsan yahay inuu xogteeda wax ka ogyahay, kaas oo ku saleysan xiriirka u dhexeeya wadaadada Soomaalida iyo kuwa Sacuudiga.
Dagaaloogayaasha Muqdisho oo aan lahayn mabda’ celiya iyo maamul ay raacsan yihiin oo hirgelin kara qanuun ku dhaqan ayaa hal mar oo keliya waxey siyaasadoodii u soo wareejiyeen iney ka ganacsadaan qabqabashada wadaadada Soomaalida, kaas oo ay u arkaan in Dowlada Mareykanka ay ku taagereyso dhaqaalaha ku baxa la dagaalankooda.
Hogaamiyeyaasha hubeysan ee Xamar ayaa mar hore waxey isku diyaariyeen iney la dagaalamaan Col. C\_llahi Yusuf. Laakiin hadda waxey u arkaan iney ka maarmeen dagaal ay la galaan C\_llahi, waxeyna cududoodi hadda u soo jeediyeen mashruucan uu maalgelinayo sirdoonka Mareykanka, kaas oo ay istuseen inuu uga faa’iido badan yahay kan C\_llahi.
Ujeedada dagaalka ayaa huwan qaabka iyo farsamada la isugu gumaado dambiilayaasha u abaabulan sida Maafiyada oo kooxba kooxda kale laga hor keenayo si ay madaxda isaga dilaan, kooxuhuna ay sidaas ku burburaan. Taas waxey meesha ka saareysa in eeda iyo kala aarsiga aysan lug ku soo yeelan cidda gadaal ka soo abaabuleysa iska horkeenka kooxaha. Cadowtinimada u dhexeysa kooxaha oo aad u sareysa ayaa waxey meesha ka saareysa qolada saddexaad ineysan waxyeelada colaada saameyn ku yeelan.
Hadda ka hor ayey ahayd markii isla sirdoonkaas ay u adeegsadeen iney iska horkeenen Caato iyo Caydiid oo ay u arkayeen kii la dilo inuu dantooda yahay, ayse ka sii jeclaan lahayeen in labaduba ay dhintaan oo gacantooda isku eersadaan. Xaaladaas ayaa u eg mida maanta taagan, waayo haddii ay dagaalkaas ku jabaan dagaaloogayaashu waa guul, haddii ayse ku guuleystaan tirtirida wadaadada Soomaaliyeed iyana waa guul kala, laakiin waxey dantooda ugu weyn ku jirtaa markii labad kooxood ay iska laayaan madaxdooda, taas oo ah mida ay hadda u muuqato in qaabkeeda loo soo abaabulayo.
Dagaalka Xamar laga abaabulayo ayaa ah mid la wada daneynayo, waayo Col. C\_llahi ayaa aaminsan in haddii laga sii jeediyo hogaamiye kooxeedyada hubeysan ee Muqdisho inuu helayo fursad uu ku hirgeliyo maamulkiisa heehaabaya oo salka dhigi la’. Col. C\_llahi ayaa dagaalka Xamar jeclaan lahaa in lagu jebiyo qabqablayaasha dagaalka, fekerkaas uu qabo oo uu la aamusan yahay ayaa laga yaabo iney u keentay inuu sii waayo taageerada Itoobiya iyo Mareykanka.
Inkasto Col. C\_llahi uusan kala jecleyn wadaadada iyo dagaaloogayaasha heybtooda, haddana dowladiisu waxey la kici weysey siyaasad xumadiisa iyo mariinwaaga siyaasadeed ee kala dhexeeya dagaaloogayaasha Muqdisho. Waxaa u muuqata korneylka in haddii laga adkaado dagaaloogayaasha ay isaga u fududahay inuu dhaso uga adkaan karo wadaadada oo ku soo riiqday dagaalkaas. Qolooyinka sirdoonka ayaa qaba gumaadka ay isku geystaan labadaas kooxood iney soo dedejineyso xalka magaalo madaxda Muqdisho oo ku soo noqota dhowrista xeerka iyo kala dambeynta, ama cabsida wadaadada oo meesha ka baxda.